Kaniisad shaqaaleysay imaam | Somaliska
Kaniisada Sofia ee ku taal magaalada Stockholm ayaa shaqaaleysay imam Muslim ah oo shaqadiisa noqoneysa in uu ka shaqeeya xiriirka u dhexeeya Kaniisada iyo Muslimiinta. Imaamkaan oo lagu magacaabo Othman Al Tawalbeh kana soo jeeda dalka Jordan ayaa ah qabiir ku taqasusay Islaamka iyo shareecada. Kaniisada ayaa sheegtay in ujeedada loo shaqaaleysiiyay imaamka ay tahay in uu soo bandhigo Islaamka saxda ah oo uu ka hor tago neceebka iyo been abuurka laga sameeyo Islaamka sida in gabdhaha lagu qasbo niqaabka. Khaar ka mid ah baadariyiinta Kiristaanka ayaa cambaareeyay imaamka lagu soo daray kaniisada Sofia ayagoo sheegay in aysan habooneyn in imaam Muslim ah uu dhex fadhiyo kaniisada maadaama farqi weyn u dhexeeyo Islaamka iyo Kiristaanka ayagoo intaas ku daray in waxyaabaha sida in gabdhaha lagu qasbo niqaabka aysan ahayn been abuur balse tahay xaqiiqo. Ninkaan ayaa u muuqda mid weerar badan ka soo wajihi doono dhinacyo badan oo ay ku jiraan bulshada Muslimiinta ayadoo aan la fahmi karin sababta uu imam Muslim ah uga shaqeynayo kaniisad.
Kaniisada Sofia ee ku taal magaalada Stockholm ayaa shaqaaleysay imam Muslim ah oo shaqadiisa noqoneysa in uu ka shaqeeya xiriirka u dhexeeya Kaniisada iyo Muslimiinta. Imaamkaan oo lagu magacaabo Othman Al Tawalbeh kana soo jeeda dalka Jordan ayaa ah qabiir ku taqasusay Islaamka iyo shareecada.
Kaniisada ayaa sheegtay in ujeedada loo shaqaaleysiiyay imaamka ay tahay in uu soo bandhigo Islaamka saxda ah oo uu ka hor tago neceebka iyo been abuurka laga sameeyo Islaamka sida in gabdhaha lagu qasbo niqaabka.
Khaar ka mid ah baadariyiinta Kiristaanka ayaa cambaareeyay imaamka lagu soo daray kaniisada Sofia ayagoo sheegay in aysan habooneyn in imaam Muslim ah uu dhex fadhiyo kaniisada maadaama farqi weyn u dhexeeyo Islaamka iyo Kiristaanka ayagoo intaas ku daray in waxyaabaha sida in gabdhaha lagu qasbo niqaabka aysan ahayn been abuur balse tahay xaqiiqo.
Ninkaan ayaa u muuqda mid weerar badan ka soo wajihi doono dhinacyo badan oo ay ku jiraan bulshada Muslimiinta ayadoo aan la fahmi karin sababta uu imam Muslim ah uga shaqeynayo kaniisad.
March 14, 2011 at 11:29
subxaanallaah, muslimiinta dhamaan waan idin salaamay qofkasta oo muslim ah damiirna leh wuu fahmi karaa ujeedada ka danbeeyso nin muslim ah hadana sheeganaayo inuu imaam masjid yahay laga shaqaleysiiyo meelaha lagu caabudo sanabyada (Asnaamta) Waxeey ku leeyihiin imaamka waxaa lagu shaqaaleysiiyay inuu soo bandhigo islaamka saxda.kkkkk.yaa rabbanaa War qofkasta oo muslim ah rag iyo dumar waa ku qasab inuu raaco waxa ilaaheey faray,ayaadaha quraanka ee ilaaheey soo dejiyay ee nagula farayo inan ka leexano waxa xun oo aan racno wadada toosan ayaa na qasbayo, Aniga imaam kaas talo ayaan usoo jeedinayaa waxaan dhihi lahaa haka noqdo waxa uu sameeyay oo hadana badariyadii kiinasadaha ay canbaareeyn usoo jeediyeen. allaa weeyn
Bashiir Macalin Abuxudayfah says:
Cajabal Cujaab Alloow quudkeena meel daran hanaga gelin !!
Wallaahi ninkaan Cusmaana hadda ka hor ayaan taariikhdiisa ka aqriyay buug Swedidh ahaa oo magaciisu ahaa \_\_ Jag vill bo Sverige// sawiradiisa waxaa ka mid ahaa isagoo la taagan caaskiisa oo Caariyo ah ( Surwaal qabta ) waana arin dhibkeeda leh nin Imaan Muslim ah sheeganaa oo islaantiisa sawjadiisa ay surwaal qabto !!
Maxaw dad Imaam u noqdaa qofkii xaq ku lahaa in aw wax u sheego ee Aaakhiro la waydiinayay ayaaba dhar la e !!
Alla Maxaa aakhir Zamaan la joogaa !!
Aqristayaasha kale ra,yigooda aanbal maqalno .
asc bashiir walaal adiga oon eedeny ninkaan imaamka ah bal ku noqo inaga hadii aan soomaali nahay waxaan islaanimada ka naqaanaa kaliya in xijaab la qaato maahan kaliya islaamka xijaab islaamku waa in qofku uu gudaha iyo banaankaba islaanimadiisa ayka muuqataa marka walaal anaga soomaali baan nahay xijaabkeenana dhulka ayuu jiidaa haddana waxaan ku dhaqanaa wax yaabo badan oo diinta islaamka aan sal iyo raad ku laheyn midda kale waxa imaamkaan uu u tagay kaniisadda waxaa laga yaabaa wax yaabo badan inuu famahsiiyo ama uu ka dhaadhiciyo dadkan gaalada ah oo diinta islaamka si qaldan ay u fahamsiiyeeyn shaqsiyaad muslim sheegta hadana ka fog diinta waxa ay ka qabto dhaqankooda ficilkooda iyo qowlkoodaba marka walaal yaanan la fiirin kaliya meesha kaniisadda ee aan fiirino waxa kasoo baxa
Asc ilaah baa mahad leh marka hore walaal wixi xun bulshadaada iyo ehelkaagaba waa laga ilaalshaa soomaalidana waa umada aad ka dhalatay wixi xuna waad u sheegi kartaa hadii ay kaa qaadan waayana naftaada iyo ehelkaaga aa laga dhowraa taas hadaad yeeshana oo adi iska bilowdo soomaali oo dhan dad wanaaga lagu tilmaamo ay noqonaayaan inaad imaam dhan oo kaniisad ka dhex shaqaynaayo aad soomaali usoo qaadato maahan wixi xuna ilaah baan ka magan galnay soomaalidana imaankooda alaha xifdiyo aan leeyahay irsaaqada ALAAH baa noo waasiciyay aa ILAAHOW quudkeena meel cariiriya hanaga galin AAMIIN AAMIIN AAMIIN
Ku Muscab >
Walaal Muscab horta mahadsanid waana kaa gedoomay ra’yigaaga saliimka ah .
Balse sidaa oo ay tahay ina adeer haddii arimaha aan kala qaadno , oo aan kala dhig dhino si aan si baraxtiran ugu wada fahamno . Horta walaal mida Soomaalida midaan kaa leeya , mida ninkaana midaan kaa leeya .
1) Soomaalideena : Akhi horta waxaad sheegtay waxbaa ka jira waana wax jira , balse waxaad ogaataa 2 arin
B) Soomaalida rizaqa meesha xun u martay Hunguri ayaa u geeyay ayaa la dhihi karaa , taana waan isku raacsana .
T) Mida labaadna Jaahilnimo ay Diinta ka jaahil yihiin iyo Hunguri ayaa isku biirsaday , marka walaal dadkaa arintooda halkaa aan ku afjarno waad ila garatay ayaan filaa .
Imaamka : Walaal ogaaw martabada Imaamnimo ma sahlana in Ummad dhan Imaam , loo noqdo ma sahlana , cilmi ayayna u baahanta , yarkaana sida aan taariikhdiisa ka aqriyay Jaamacad ayuu Cilmi Diiniya uga soo baxay weliba qaybta Sharaceedada !!
Balse > Xaaskiisa waa Caariyad ( Xijaab aan qaadan )
Mida kalena Sunnadii Nabiga ayuusan ku dhaqmayn isagoo Imaam ah . Qofka Imaamka ahna waa Indhaha Ummada sidaa awgeed waxyaabo waxaa jira lagama maarmaan ay tahay in laga helo , Nabiga Scw waxaa aw yir : Gerka Daysta, Shaarbaha gaabiya oo Yahuuda ku Khilaafa :
Balse Ninkaan In aw Suno Nabi fuliyo, Yahuudno Khilaafo iska daaye waxaaa aw Khilaafay Sunadii Nabiga oo bil cagsi ayuu u dhigay Gerkii ayuu Jaray , Shaarbihiina waa daayay !!!!
Kayfa marka aw Imaam ku noqonaa , !!
Iyadoo halkaa marayso Ayuu Kaniisad Galay !!!
Fakayfa Xaaluhuu !!
Kaniisad in la galo , maxaa loo galaa !
Haddii aw gaalo la doodaa Masjidka ayuu ku casuumi lahaa !
Meelo kale ayuu ugu tegi lahaa !1
Ee waa maxay Kaniisad Shaqaalaysiinee !!
Muscab akhi qofka qalad laguma difaaco , waxaad leeda waxaw ka dhaadhacsiinaa , sideeboo wax uga dhaadhacsiinaa , miyaadan qoraalka fahmin ( Kaniisad ayaa Shaqaalaysiiday ) !!
Akhi Muscab marka , Alle ayaa Quraankiisa ku yiri : “Quu An Fusakum Wa Ahliikum Naaraa “”
“”Naftiisa iyo helekiina ka Badbaasha Naar “”
Marka ehelkiisa hala soo bilaabo marka ugu horaysa marka aw soo islaaxiyo ayuu , bulshada soo gaari karaa waxna u sheegi karaa imaamna u noqon karaa !1
Balse qof Gurigiisa holcaa miyaa guri kale wax tara !
Aakhiro Xaaskiisa ayaa la waydiinaa , ee bulshada la waydiin maa !
Lana oran maa maxaad Imaam u noqon wayday ?
Sidaa awgeed akhi marnaba Soomaali qalad aan u qalmin qaladkooda ha saarin adigoo raaliya !
Jaahilnimo iyo Baahi is biirsaday ayaa Soomaali biday !
Ninkaanse , Jaahilna Maahan, Baahina ma hayso !
Cilmi aw Xaqqa iyo Baadilka ku kala saarana waa aw leeya !
Alloow Cilmi laguma sugnaado ee awoodaadaa lagu sugnaadaaye na sug !
Alloow adigaa qalbiyadeena rog rogee , hanuunka nagu raaji .
Akhi fillah igana raali noqo Allaha kaa raali noqdee Wasaalmu calaykum .
Bismilaahi Raxmaani Raxiimi sharciga dhigayo qof muslim ah inow kaniisad kashaqeeyo saw u yaal.
Tan kale diinta saxda ah aw dadka baraa lagulahaa diinta saxdaa maan eheyn ta lagu soo dajiyay Nabi Muxamed Scw ???? Tas qof kasto waa yaqaan mana looga baahno nin astaan kadhigtay inaw xaskiisa oo dhara,meelaha kuso qoro. Swedeshka tan kale Muscab sxb xijaabka in laxirto kaliya diintu ma,ahin lkn fardigaas waa mid kamid ah waxyaabaha Alla ku farad yeelay haweynka Muminka ah niyad saafigaana ma,ahin dhar lee lakin waa qayb kamid ah nolosha qofta bini adimka ah ee gudanaayo wixi Allaah ku farad yelay Wbtawfiiq